Banaanbax nabadgelyo lagu dalbanayey oo Muqdisho ka dhacay - BBC News Somali
Banaanbax nabadgelyo lagu dalbanayey oo Muqdisho ka dhacay
5 Agoosto 2018
Image caption Waxay u qaylinayaan in la helo dadka dilalka gaysta
Bannaanbax lagu dalbanayo in wax laga baddalo xaaladda amniga dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho.
Bilihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayey dilal isdaba joog ah oo dhallinyarada si gaar ah loola beegsanayay.
Khamiisti waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo hal-abuur ganacsi oo cusub ku soo kordhiyey ganacsatada dhallinyarada ah ee magaalada Muqdisho.
Lahaanshaha sawirka Facebook/Mary Harper
Image caption Maxamed Sheekh Cali iyo Mary Harper oo dhex jooga meherad uu Muqdisho ka hirgaliyey
Maxamed Maxamuud Sheekh Cali ayaa dhaawac loo gaystay ugu dhintay isbitaalka.
Muna Xasan Maxamed oo ka mid ah dhallinyaradii banaanbaxaas cabashada ah soo abaabulay ayaa BBC u sheegtay inay ka cabanayaan "dhallinyarada la iska dilayo ee la leeyahay waxaa dilay dad aan haybtooda la aqoon".
Waxay dalbanayeen dhallinyaradaas oo weer cad xirnaa in dadka dilalka noocaas ah gaysta la soo helo oo caddaaladda la hor keeno.
Suxufi lagu dilay Muqdisho
Xildhibaanad lagu dilay Muqdisho
Image caption Boorarka ay siteen ayaa is fasiraya
"Waxaan doonaynay in aan shucuurteenna muujinno oo aan dareensiinno dadka uu damiirkoodu dhintay inay jiraan dad uu damiirkoodu nool yahay oo dhallinyaro ah oo ka damqanaya dhiiga walaalahooda la daadinayo" ayey tiri Muna.
Waxay intaa ku dartay in ay dawladda u direen warqad ay ku dalbanayaan in dhallinyarada sida macno darrada ah loo dilay ay cadaalad helaan, oo dadkii dilay sharciga la hor keeno.
Waa markii ugu horraysay ee dhallinyaro magaalada Muqdisho ku nool ay ka mudaaharaadaan dilalka loo gaysanayo dadka aan waxba galabsan, oo dawladdana ay culays ku saaraan inay ka daba tagto dadka falalkaas ka dambeeya.
Maxaa dhaliyey banaanbaxan?
banaanbaxan ayaa ka dhashay dilka Maxamed Maxamuud Sheekh Cali oo ahaa nin dhallinyar oo caan ku ahaa ganacsiga magaalada Muqdisho, kaasoo Khamiistii ay dabley aan haybtooda la garan ku dileen agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dhaawac daran ayaa ka soo gaaray weerarka, waxaana loola cararay isbitaalka, halkaas oo uu ku geeriyooday.
Sida uu ku soo warramay wariyaha BBC ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan, Maxamed Wuxuu ka mid ahaa dadkii qurbaha ka soo laabtay, wuxuuna dalka ku soo noqday sannadkii 2011.
Image caption Maxamed iyo hooyadiis
2012 ayuu noqday qofkii ugu horreeyey ee dalka ka hirgaliya adeegga dhaqidda qallalan ee dharka ee af ingiriiska lagu yiraahdo dry cleaning, adeeggaas oo aan dalka ka jirin tan iyo wixii ka dambeeyey xilligii uu waddanku galay burburka.
Wuxuu kaloo soo kordhiyey barnaamij toos loo daawado, oo uu ku dhiirri galinayey dhallinyarada inay ku soo bandhigaan hal abuurkooda, si guulaha ay gaareen ay ula wadaagaan dhallinyarada kale, oo ay ugu noqdaan tusaale ay ku daydaan.
Dilka Maxamed Maxamuud Sheekh Cali waxaa cambaareeyey ururrada bulshada rayidka.
Hooyada dhashay marxuumka, Sahra Maxamed Axmed, waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa ururrada bulshada rayidka, waxayna ka tirsan tahay ururka SWDC.
Sidoo kale, waxaa aabbe u ah Jeneraal Maxamuud sheekh Cali oo ku magac dheer Dable Biloote, oo ah taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya.
Ma jirto cid loo qabtay dilka Maxamed Maxamuud Sheekh Cali. Dableydii dishay ayaa iyagana baxsaday.